Tatoazy Wolf: dikany sy tandindona | Ny fanaovana tatoazy
Susana godoy | | Tatoazy biby
El amboadia amboadia Izany dia zavatra tian'ny rehetra amin'ny hatsarany sy ny herimpony. Ho an'ny olona maro, ny amboadia dia manana tandindona lehibe noho ny tantara sy ny dikany. Amin'ny kolontsaina sasany, ny amboadia dia mpiremby ny alina, mpihaza manam-pahaizana ary tahaka ny biby hafa manaitra ny sasany, ny hafa matahotra azy. Ho an'ny kolontsaina hafa, ny amboadia dia mpiady, mpitarika lehibe ary mpiaro ny olona tsy manan-tsiny.
Samy manana ny lazany izy ireo ary toa biby miavaka ny amboadia izay toerana hipetrahan'ny fontsika foana satria iray amin'ireo razamben'ny sakaizan'ny olona indrindra io: ny alika.. Amboadia mandrakizay dia hita ho mpiady mahery nefa tsy matahotra, toy ny biby mpiremby voajanahary ary natahotra azy ny olona noho ny fiheverany azy ireo ho biby.
1 Ny tatoazy amboadia dia maneho ny olona ambony
2 Wolf tombany midika
3 Ny amboadia amin'ny fiteninay
4 Karazana tombokavatsa amboadia
4.3 Amin'ny sandry
4.6 be nampierona,
4.7 takariva iny
5 Ny tatoazy amboadia tsara indrindra
Ny tatoazy amboadia dia maneho ny olona ambony
Ny amboadia dia nandalo dikany maro arakaraka ny fotoana sy ny kolontsaina, fa ny tena izy dia biby tsy mampino foana mendrika ny deraina ary mazava ho azy ny fanajana.
Ao amin'ny foko amerikana sy meksikana marobe, ny amboadia dia hita ho herin'ny tanjaka sy tanjaka, fa andry fahendrena sy mpitari-dalana ara-panahy koa. Amerikanina teratany izy ireo, ny amboadia dia mihoatra ny biby dia ary heverina fa totem amin'ny fiainana ho avy izy io satria manampy amin'ny fahatakarana ny fahafatesana sy ny traikefa amin'ny toetrany mpiremby.
Rehefa amboadia amam-behivavy ny amboadia dia mijanona miaraka aminy mandrakizay izy ireo. Ray aman-dreny be fitiavana izy ireo ary hiaro azy ireo foana na inona na inona toe-javatra misy azy ireo. Izy ireo koa dia fantatra amin'ny hoe biby mahatoky sy be resaka.
Ny sarin'ny amboadia mierona amin'ny volana dia tandindon'ny fahaizany maneho ny fahefany amin'ny faritra na miantso ny mpikambana ao anaty kitapo. Izy io dia sary tsara indrindra amin'ny tatoazy ary ambonin'izany rehetra izany, tototry ny tandindona sy ny dikany ho an'ilay olona manapa-kevitra ny hahazo io tatoazy amboadia io.
Tsy ny fidradradradrana irery no fitaovana tokony hifandraisan'ny amboadia amin'ireo mpiara-mianatra aminy, fa mampiasa ny fitenin-vatana ihany koa izy mba hampitana fahatsapana maro karazana toy ny: tahotra, fanoherana, fangorahana ary koa firaiketam-po amin'ireo mpikambana ao anaty kitapony. Satria ny amboadia mpamaky malalaIzy io koa dia manana fihetseham-po satria zavamananaina manana ny toetrany manokana.
Ny amboadia dia mampiasa ny fahatsapana fofona, fandrenesana ary fahitana mba hanehoana fihetseham-po be pitsiny mba hifampiresahana. Amin'ireny karazana fitondran-tena ireny dia azony atao ny mampiseho fihetsika ara-tsosialy ianarana avy amin'ny ray aman-dreniny sy ireo mpikambana ao amin'ilay fonosana.
Wolf tombany midika
El amboadia amboadia dia afaka manondro ireto dikany manaraka ireto:
Mivadika Amin'ny Vadinao
Mazava fa ny dikany dia hiova arakaraka ny olona sy ny zavatra niainany teo amin'ny fiainany, satria samy afaka mandika ny tandindon'ny amboadia amin'ny fomba samihafa. Angamba ianao tia amboadia satria nanam-bintana ianao nihaona tamin'ny sasany ary nahatakatra ny toetrany sy ny andriana izay mampiavaka azy ireo raha nohajaina tamim-panajana sy fitiavana izy ireo hatramin'ny nahaterahany. Na mety tianao ilay izy satria tandindona zavatra manan-danja aminao sy ny fianakavianao izany.
Ankoatr'izay, ny amboadia koa dia tandindon'ny vintana sy ny fahavokarana, dikany tena lehibe ho an'ny olona maro. Amin'ny fomban-drazana Mongoliana dia mino izy ireo fa taranaky ny amboadia ary izany no antony ahitany azy ireo ho biby masina. Betsaka ny olona no mihevitra ilay amboadia ho zavaboary izay misarika vintana sy fanambinana.
Any Japon dia mieritreritra ihany koa izy ireo fa ny amboadia dia manan-kery lehibe ary miaro ny olona amin'ny aretina na amin'ny fahantrana sasany. Inona koa, any Japon dia mihevitra ihany koa izy ireo fa ny amboadia dia manampy ny mpivady tsy miteraka hiterahana.
Amin'ny kolontsaina Chechen, ny amboadia dia mihoatra ny biby dia, mariky ny avonavom-pirenena. Mino izy ireo fa ny renin'ny amboadia no tandindon'ny hery sy fiarovana faratampony izay manampy ny olona hahatsapa ho voaro.
Ny amboadia amin'ny fiteninay
Amin'izao fotoana izao ny amboadia dia bibidia izay ankafizinay ary tena tianay sy manintona vibe tsara, maro ny olona manao tatoazy a amboadia amboadia angamba noho ny hatsarany sy mampita hery sy hery.
Saingy tsy tsapantsika izany, ilay amboadia dia na amin'ny fitenintsika ankehitriny aza satria nanan-kery teo aminy ny fisian'izany. Angamba ianao efa nilaza zavatra toy izao: 'Noana be aho mihinana omby'. Mazava ho azy fa tsy hihinana omby ianao, fa io kosa dia fomba iray hanentanana ny fahalalanao fa noana ianao. Teny hafa izay misy ifandraisany amin'ny fitaoman'ilay amboadia amin'ny kolontsaintsika dia:
Amboadia irery Ny amboadia mitokana dia manondro olona iray izay aleony irery ary mitady ny làlan-kalehany, lavitra ny fikorontanan-tsaina azon'ny vahoaka ahatongavany.
Wolf miaraka amin'ny hoditry ny ondry. Izy io dia manondro ireo olona izay toa olona tsara ary profil tonga lafatra mihitsy aza ary mety ho olona mahatsiravina.
Wolf toetra. Rehefa milaza aminao izy ireo fa manana toetra amboadia ianao, tsy isalasalana fa manome teny fiderana anao izy ireo, mila mamaky fotsiny ny dikany ianao mba hahalalanao izay lazainy.
También existen tatoazy amboadia foko izay mifandraika amin'ny lohahevitra misintona sy tontolo manaitaitra kokoa. Etsy ankilany, raha manapa-kevitra ny hanao tatoazy amboadia amboadia ianao dia tsara ny milaza fa maneho angovo maizina. Raha manao amboadia amboadia mibaribary ianao dia hampiseho ny fanoherana sy ny fahasahianao manoloana ny fiainana ary raha manao tombokavatsa ianao dia masiaka avy eo dia hasehonao ny herim-ponao rehetra, ny fiarovanao ary ny fahatsapanao fiarovana.
Ity no zava-dehibe indrindra tokony hatsarainao amin'ny tranga tianao manaova tatoazy amboadia ao amin'ny vatanao, saingy tadidio fa ny tena zava-dehibe dia izay dikany aminao, na inona na inona dikan'ny olona na kolontsaina hafa.
Karazana tombokavatsa amboadia
Toy ny ankamaroan'ny endrika amam-bika, ny tatoazy amboadia dia tsy ho tavela any aoriana. Manana toetra iraisana lehibe izy ireo ary izany dia ny fahafahanao mankafy azy ireo amin'ny fomba samihafa nefa tsy manova ny dikany na ny silhouette azy ireo.
Ao amin'ny tatoazy amboadia foko, ho hitantsika ny fomba mahatonga ny ranomainty mainty ho mpandray anjara fototra. Ho fanampin'izany, ny silhouette an'ny biby dia hatsangana noho ireo tsipika ireo izay mampiavaka an'io fisehoan-javatra io. Fomba tokana sy tena tany am-boalohany hanomezana aina ny tatoazy. Ho fanampin'izay, mitondra miaraka aminy ireo hevitra lehibe indrindra nentim-paharazana izay notehirizina tamin'ny foko taloha.
Ny fikitika minimalist indrindra dia mifantoka amin'ity fomba ity. ny tatoazy amboadia geometrika Hamboarina amin'ny tsipika izy ireo, ary koa boribory na telozoro. Fa minoa izany na tsia, izy rehetra mirindra tsara, mahazoa vokatra mahafinaritra, tsotra ary tena maoderina. Voalaza fa ireo karazana tandindona ireo dia nanjary sarobidy tokoa mandrapahatongan'ny vanim-potoana Renaissance, na dia toa ankehitriny aza dia mbola izy ireo ihany.
ny amboadia amboadia amin'ny sandry matetika izy ireo no manaingo ny tampony amboniny. Na dia te-hanampy originality kely kokoa aza ianao dia azonao atao ny manao tatoazy foana ao an-damosin'ny tananao, manakaiky ny kiho.
Raha tianao ny mitambatra loko, dia ho tianao ny tatoazy amboadia watercolor. Ny sisin-tany mainty dia ahemotra amin'ny lafiny iray satria ny fipoahan'ny hazavana no ho mpiorina voalohany. Ny alokaloka tsara indrindra dia miaraka amin'ny tatoazy tsy misy dikany nefa tsy manadino fa ny amboadia ihany koa no olona manan-danja indrindra.
Raha te-hitafy a amboadia amboadia ao ambadika, avy eo dia ho toerana tsara haleha ho an'ny endriny lehibe kokoa. Azonao atao foana ny manambatra ny endrik'ilay biby amin'ny volana na ny fidradradradrany, izay tena ilain'ny karazan-endrika ihany koa.
ny amboadia mierona fahalemena lehibe izy ireo. Efa notanisainay izy ireo fa tsy isalasalana fa mahery fo ihany koa izy ireo. Raha midradradradra amam-bolana ny amboadia dia haneho ny maha-vehivavy azy. Saingy miaraka amin'izay koa dia hery, fiarovana na fahendrena.
Hatramin'izao dia efa hitantsika ny saga "Twilight". Eny, ny toetran'ny Jacob mainty manana tombony amin'ny fiovana ho amboadia. Saingy amin'ny endriny maha-olombelona dia manana tatoazy eo amin'ny sandriny izy. Famolavolana fomba foko iray izay azo avahana toa azy, manasongadina ny lohan'ny amboadia. Azo antoka fa efa nahatsikaritra ianao!
Ny tatoazy amboadia tsara indrindra
Na dia maro sy isan-karazany aza izy ireo dia misy hatrany ireo misongadina kely kokoa. Ka raha mitady hevitra sy aingam-panahy ianao dia avelantsika eto izy ireo amin'ny endrika sary. Ny tatoazy amboadia tsara indrindra eo am-pelatananao! Inona no tianao indrindra ?.
Tatoazy amboadia sy mandala, manintona ny lafiny wild sy sensory anao
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Ny fanaovana tatoazy » Karazana tombokavatsa » Tatoazy biby » Tatoazy amboadia
Boris dia hoy izy:
Salama, tsara tokoa ny pejinao, misaotra betsaka tamin'ny famolavolana sy ny fampahalalana
Valiny tamin'i Boris
Jackelineotero dia hoy izy:
Ny tena marina dia manintona ahy be ireo zavatra ireo ka indraindray dia tena te-ho tonga mpamindra fo aho
Valiny tamin'i Jackelineotero
Sônia Maria dia hoy izy:
Tena tsara tarehy ny pejinao tiako be ny um gram salu
Mamaly an'i Sônia maria
Mpamitaka Di Salvatori dia hoy izy:
Hitako fa tena ilaina tokoa ny fanazavanao amin'ny lafiny famolavolana sy dikany, satria io fomba io ho an'ireo mpankafy tatoazy dia mora amintsika kokoa ny mahafantatra ny dikan'ilay tatoazy izay hodiavintsika amin'ny hodintsika. Tena mahaliana ny fampahalalana nangonina. Misaotra sy Tso-drano.
Valiny tamin'i Deiver Di Salvatori
Misaotra betsaka, Arturo!. Tatoazy mahafinaritra! 🙂
Ny tatoazy misy lavenon'ny malalanao dia efa zava-misy
Tonga amin'ny MTV Spain ny vanim-potoana faharoa amin'ny 'Tattoo a dos'